जस मात्रै लिने कांग्रेस लिपुलेकको जिम्मा किन लिँदैन ? सिमानाको कुरामा ओलीलाई दोष दिए कांग्रेसले रास्ट्रवाद कमाउछ ? डा सुन्दरमणि दीक्षित – Etajakhabar
जस मात्रै लिने कांग्रेस लिपुलेकको जिम्मा किन लिँदैन ? सिमानाको कुरामा ओलीलाई दोष दिए कांग्रेसले रास्ट्रवाद कमाउछ ? डा सुन्दरमणि दीक्षित
काठमाडौं । नागरिक समाजका अगुवा डा सुन्दरमणि दीक्षितले प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस राम्रो कुराको जस मात्रै लिन थालेको आरोप लगाएका छन् ।
क्यानाडानेपालसँग कुरा गर्दै उनले पटक पटक सरकारमा गएको कांग्रेसले अहिले राम्रो पक्षकोमात्रै जस लिने र अपजस भने सत्तारुढ नेकपालाई लगाइरहेको आरोप लगाए । सरकारमा धेरै समय बस्दा विकास निर्माणको काम थालेको र अहिले त्यसैले पूर्णता पाइरहेको भन्दै कांग्रेसका नेताहरुले जस लिने गरेको दीक्षितको भनाइ छ । तर, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको ३७२ वर्ग किलोमिटर नेपालको अतिक्रमित भूमि भारतले आफ्नो नक्सामा समेटेको विषयमा सत्तारुढ नेकपालाई गाली गरेर कांग्रेसले अपजस लिन नचाहेको दीक्षितले आरोप लगाए ।
एक अर्काे प्रसङ्गमा उनले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो अस्तित्व रक्षाका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कुरा मानेर अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको टिप्पणी गरे । ओलीले भनेका कुरा मानेर हिँड्नु पर्ने बाध्यताअनुसार नै प्रचण्डले देखावटी कार्यकारी अध्यक्ष लिएका उनको आरोप छ ।
मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था, प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्य, प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराईलगायत राजनीतिक नेताहरुको क्रियाकलापसहित विभिन्न समसामयिक विषयमा डा. दीक्षितसँग क्यानाडानेपालका सन्तोष निरौलाले लिएको यो अन्तर्वार्ता:
(आचार्य सत्तारुढ नेकपाका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।
Posted on: Saturday, November 30, 2019 Time: 12:11:26
-20257 second ago
-18315 second ago